Randrana, tsy bango tokana
Accueil » Chronique » Randrana, tsy bango tokana
Tsy dia mba mpanaraka ireny fifidianana Miss izao na Miss izao ireny aho. Fa mba sendra nahita ny sarin’ny «Miss Mada­gascar 2020» tamin’ny gazety sy ny sarin’ny «Miss Analamanga 2020» ao amin’ny takila Facebook Imerina_sy_ny_Merina, dia nandray penina (fomba fiteny satria efa azerty hatriniela). Tsy ny hatsaran-tarehin-dry zareo akory aza no ho resahiko fa ny volony mirandrana.
Randra-madinika, randrana difisesy, randrana lambomiditra, randrana ampanga, randrana tsitongatonga, randrana voankà­lana, randran-ketsa, randran-tarihina, randrana fito anila, randrana telo lahatra; bango ankatoka, bango roa, bango tokana; tananivoho: voatanisa ireo ao amin’ny Dictionnaire Abinal-Malzac tamin’ny taona 1888.
Tsy dia tsikaritro, iza tamin’ireo no fanaon’ireo renibeko ho an’ny andavanan­dro ao an-trano sy rehefa hivoaka. Tsaroako fotsiny fa raharaha iray mano­kana, naka ny fotoanan’izy ireo. Ho an’ny zaza manana reny bory volo, nahagaga ny nahita ny halavan’ny volon-drenibe rehefa mivaha. Nisy ary hono lava noho ny tompony ny volo ka niakatra seza rehefa hibango azy…
Marina tokoa ilay hoe «samy manana ny randrana manendrika azy». Tany amin’ny efapolo taona lasa (vao omaly anie izany raha oharina amin’ny anjato taona maron’ny Tantara), henatra ho an’ny vehivavy izany hivoaka ny trano ka tsy mirandrana na tsy mitafy lamba.
Ankoatra ny randrana, narantin’ireo Miss ho an’ny sary, asa na nisy fanazavana azy ireo ny fomba sy karazan’ny randrana: ohatra, ny randrana valo anila hono tsy fanao raha tsy ho an’ny maty. Tahaka ny zanaka sy zafikelin’ireo renibeko, mino aho fa tsy manao randrana andavanandro intsony koa izy mirahavavy Miss. Sady tsy mitafy lamba, fa mitena akanjo.
Io «mitena akanjo» io dia efa voaray tao amin’ilay Dictionnaire taona 1888 voalaza etsy ambony. Na ho an’ny Lahy na ho an’ny Vavy, tsy mitafy lamba intsony fa nanaraka ny fitafim-bazaha.
Tany amin’ny taona 1822 tany ho any, noborian-dRadama ny volony, fa hoe izany no fanaon’ny miaramila any Andafy. Nisahotaka hono Imerina manontolo satria tsy fomban-drazana izany. Ny olona rehetra lava volo, na rosarosa na rakorako. Ny olo-meloka no navahana ho tondroimolotra satria tapa-bolo. Nisy andiambehivavy sahy niteny mahery mihitsy ny Mpanjaka tamin’izany, ka dia nohelohina ho faty. Nanomboka teo no tsy nitondra sanga sy nanao lava volo intsony ny lehilahy teto Imerina.
Atolotra ireo tanora mety ho zanaka izao tantara tsotra manodidina ny bangovolo sy randrana izao, mba tsy ho resa-bika aman’endrika fotsiny ny fifaninana samihafa.
Balance ton corona
Épidémie – La Covid-19 présente dans dix-neuf régions